यस्तो बन्दै छ नयाँ रानीपोखरी (हेर्नोस् तस्बिर), किन निस्कियो विवाद ? - Medianp
यस्तो बन्दै छ नयाँ रानीपोखरी (हेर्नोस् तस्बिर), किन निस्कियो विवाद ?
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष १३, २०७४१०:४५0
काठमाडौं, १३ पुस । यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भएको जसरी सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, मिडियाले पनि रानीपोखरीको विवादलाई थप मलजल गरिरहेका छन् । आखिर किन निस्कियो त रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विवाद ?
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको सम्पदा रानीपोखरी निर्माणबारे काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागबीच विवाद देखिएको छ । महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको एउटा समूह रानीपोखरीलाई अत्याधुनिक ढंगको सम्पदा बनाउन खोजिरहेका छन् भने उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी पुरानै शैलीको रानीपोखरी बनाउनुपर्ने पक्षमा छिन् । यस विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि तालाबन्दी गर्ने र फोड्नेसमेतका काम भइसकेका छन् ।
महानगर पदाधिकारी नै विभाजन भएपछि अहिले रानीपोखरी पुनर्निर्माण रोकिएको छ । रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि भन्दै त्यहाँ सबै माछा कमलपोखरी, नागपोखरीतिर सारिसकिएको छ भने पोखरीको पिँधमा रहेको हिलो पनि हटाइसकिएको छ । हिलो हटाएर तल खन्दा बालुवा भेटिएपछि पानी नअड्ने ठहर गर्दै तल सिमेन्टले प्लास्टर गर्ने निर्णय महानगरले गरेको छ । तर, पुरातत्वविद्हरूले भने ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गनुपर्ने भन्दै पुरानै शैलीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महानगरले बनाएको नयाँ रानीपोखरीको नक्सामा कपीसफ, स्विमिङ, पार्कलगायत रहेको छ भने पोखरीलाई सानो आकारमा खुम्चाइएको छ । यो नै अहिलेको प्रमुख विवादको विषय बनेको छ । नेपालमा पुरातात्विक संरचना पुनर्निर्माण गर्दा त्यसको कार्यविधि बनिनसकेकाले पनि रानीपोखरीको विवाद देखिएको हो
म्यानचेस्टर सिटीको कीर्तिमानी जित, ह्याम युनाइटेड २–१ ले पराजित